Hadiyadda Eebbe siiyay aadanaha, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Dunida galbeed, Kirismasku waa wakhti ay dad badani u jeestaan ​​bixinta iyo helitaanka hadiyadaha. Xulashada hadiyadaha ehelka badanaa waxay cadeyneysaa inay dhibaato tahay. Dadka badankood waxay ku raaxaystaan ​​hadiyad aad u gaar ah iyo hadiyado gaar ah oo lagu xushay si taxaddar leh iyo jacayl badan ama iskood ay sameeyeen. Sidoo kale, Ilaahay ugama diyaariyo hadiyaddiisa ku-habboon ee aadaminnimada daqiiqadda ugu dambeysa.
"Xitaa ka hor intaan dunida la abuurin, Masiix waxaa loo doortay inuu yahay wan yar allabari, laakiinse hadda, dhammaadka wakhtiga, ayuu dunidan idinka muuqday idinka aawadiin" (1 Butros 1,20). Kahor intaan la aasaaska dunida dhigin, Ilaah wuxuu qorsheeyey hadiyaddiisa ugu weyn. Wuxuu noo muujiyay wax ku saabsan 2000 sano ka hor hadiyadda cajiibka ah ee wiilkiisa qaaliga ah ee Ciise Masiix.
Ilaah waa nin saaxiibkiis ah qofwalbana wuu muujiyaa qalbigiisa weyn, sidaa darteed wuxuu si is-hoosaysiiya wiilkiisii ​​tuwaal ugu xidhay oo geliyey sariirtiisii: “Isaga oo qaab ilaahnimo ah uma tixgelin inuu boob inuu la mid yahay Ilaah, laakiin muujiyey naftiisa oo qaatay qaab addoonka, waxaa loo aqoonsaday bini aadam oo sida muuqata loo aqoonsaday sida aadanaha. Isagu is-hoosaysiiyey oo addeecay inuu dhinto, xataa inuu iskutallaabta ku dhinto »(Filiboy 2,6-8).
Waxaan halkaan ka aqrinaynaa wax ku saabsan Bixiyaha iyo heerka jacaylkiisa uu u qabo annaga iyo dhammaan aadanaha. Waxay faafineysaa fikrad kasta oo ah in Ilaah yahay mid adag oo naxariis badan. Adduunyo silica ka buuxa, isku dhac hubaysan, ku takri fal awoodeed iyo masiibo cimilo, way fududahay in la aamino in Ilaah uusan fiicnayn ama in Masiixu u dhintay kuwa kale, laakiin aniga aniga aniga maahan. Laakiin nimcada Rabbigeenna waa badatay, oo waxay la jiraan rumaysad iyo jacayl ku dhex jira Ciise Masiix. Runtii runti waa run oo mudan in la rumeeyo ereyga rumaysadka, Masiix wuxuu u yimid dunida inuu badbaadiyo dembilayaasha anoo ah kan ugu horreeya.1 Timoteyos 1,15).
Ciise waxaan ka dhex helnay Ilaah aan ku jeclaan karno, Ilaah naxariis badan, naxariis badan oo jecel. Qofna lagama reebin ujeeddada Ilaah ee ah inuu qof walba ku badbaadiyo hadiyaddiisa Ciise Masiix, xitaa kuwa isku tiriya inay yihiin dambiilayaasha ugu xun. Waa hadiyad furasho u leh aadanaha dembiga leh.
Markaan isweydaarsano hadiyado Kirismaska, waa waqti fiican in laga fikiro xaqiiqda ah in hadiyadda Ilaah ee Masiixa ku jirta ay tahay mid la isku weydaarsado oo ka badan tan aan is siinno. Waa beddelka dembigeenna caddaaladdiisa.
Hadiyadaha aan siino midba midka kale ma ahan fariinta dhabta ah ee Ciidda Masiixiga. Waa halkii xusuusinta hadiyadda Eebbe siiyay midkeen kasta. Ilaah wuxuu ina siiyaa nimcadiisa iyo wanaagiisa oo ah hadiyad bilaash ah oo ku jirta Masiixa. Jawaabta ku habboon hadiyadan waa in la aqbalaa iyada oo qadarin ah halkii la diidi lahaa. Hadiyaddan waxaa ka mid ah hadiyado kale oo badan oo nolosha beddelaya, sida nolosha weligeed ah, cafiska, iyo nabad gelyada ruuxiga ah.
Malaha hadda waa waqtigii kugu habboon, akhristaha qaaliga ah, hadiyadda ugu weyn ee Eebbe ku siin karo inaad si mahad leh ugu aqbasho hadiyadda Wiilkiisa qaaliga ah ee Ciise Masiix. Waa Ciise Masiix ee sara kacay ee doonaya inuu kugu dhex noolaado.
Waxaa qoray Eddie Marsh
© KHUDBADAHA CARRUURTA Adduunka (SWITZERLAND) | XIDHIIDH | OGEYSIISKA SHARCIYADA | SIYAASADDA ASTURNAANTA | MAIL